२२ वर्षीय रिङ्कीको ह’त्याबारे खुल्यो यस्तो सनस’नी खु’ला’शा! – PathivaraOnline
Home > समाज > २२ वर्षीय रिङ्कीको ह’त्याबारे खुल्यो यस्तो सनस’नी खु’ला’शा!
विराटनगर, २२ भदाै । मागे जति दाइजो नदिएको भन्दै भगाएर विवाह गरेपछि छोरीको ह’त्या भएको आरोप आफन्तले लगाएका छन्। सुनसरीको देवागंज गाउँपालिका ३ की २२ वर्षीय रिङ्की कुमारी मेहतालाई भगाएर बिहे गरेको परिवारले मागेको १० लाख दाइजो नदिएको नाममा उनकै ह’त्या गरेको आ’रोप लागेको हो।
भदौ ३ गते सोही गाउँपालिका–४ निवासी रमेशकुमार मेहताले छोरीलाई अ’पह’रण शैलीमा जब’रज’स्ती भ’गाएर घर लगेको २४ घण्टा नबित्दै दाइजोको लागि ह’त्या गरेको मृ’तकका बुवा जयकिशोर महतोको आरो’प छ।
गालामा ड’ण्डीफो’र र दाँतको समस्या रहेकाले दाजुले विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । उपचार पश्चात दुई दिन दाजुको घरमा बसेर उनले भदौ ३ गते बहिनीलाई फोन गरेर घर आउन लागेको जानकारी गराएकी थिइन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
श्रीमति राखेर कोठामै बे श्यालय !,‘तिम्री बहिनी र आमालाई पनि ल्याउनु धेरै कमाई हुन्छ’ भने पछि